तीनदिन पछि आगो नियन्त्रणमा - NewsNepal HD
फागुन ११,बेसीशहर ।
यहाँको एक जंगलमा लागलागी भएको तीनदिनमा बल्ल नियन्त्रणमा आएको छ । गत शनिबार दिउँसोबाट आगगाली भएको लमजुङको बेँसीशहर नगरपालिका वडा नं. ६ रहेको शान्ति, सुलीकोट र भोटेचौर सामुदायिक बनको जंगलको लागेको आगो आज बल्ल नियन्त्रण आएको हो ।
शनिबारबाट शुरु भएको आगलागीले यस नगरको वडा नं. ६ यस जंगलमा ठुलो आगलागी भएको थियो । जंगलमा अचानक लागेको आगलागीको तेस्रो दिन आज नेपाली आर्मी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय लगायतले आगो नियन्त्रणमा लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा आगलागी भएको छ । यहाँको नगरपालिकाको दम्कल, सुरक्षा निकायले अन्नि नियन्त्रण सामग्रीको माध्यमबाट आगो नियन्त्रणमा लिन सफल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको भनाई छ ।
यहाँको जंगलमा बाँसस्थान बनाउँदै आएको पशुपन्छी तथा चराचुरुङ्गी, विभिन्न जनावर तथा जमिनमा घिस्र्रिएर हिड्ने लगायतको बाँस स्थान सखाप भएको छ । जंगलमा कस्ले लगाएको आगो भनेर पत्ता लागि नसकेपनि यस नगरको वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष बोजबहादुर रिमालले भन्नुभयो, यस वडामा रहेको मकैडाँडाको भ्यू टावरमा आएका पर्यटकहरुले आगो लगाएको हुन सक्छ । यही टावरमा जाने बाटो गढीमाईबाट आगलागी फैलिएको हुन सक्ने उहाँको भनाई छ । यस जंगलमा गत वर्ष समेत आगगाली भएको थियो ।
महादेवको ध्यानात्मक प्रति मूर्ति निर्माणमा रु १०००० रुपैयां सहयाेग
जीप दुर्घनामा दुई जनाको मृत्यु
चैत २५ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन
मध्यपहाडि लोकमार्गमा हरियालीका लागि फलफुल रोपण कार्यक्रमको सर्भे प्रतिवेदन सार्वजनिक
पाँहा चहे पर्व नेवार समुदायले मनाउदै ।... 401 views
दिवा खाजा पकाउँदै आएका दलित कामबाट हटाईए... 22 views